Izindlu zaseDevoni - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTrudy
Inqanaba elitsha eliphambili kwigumbi elinye lokulala.
Le flethi entsha kraca yaphuhliswa kukho wena lundwendwe engqondweni. Nokuba utyelelo lwakho lobusuku obunye, iveki, okanye inyanga nenyanga sifuna ukuba uzive usekhaya kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho. Sifuna ukuba ibe likhaya lakho elincinane kude nekhaya. Ndikwenzele eli khaya litsha ndwendwe lwam. Ukuqala ngaphandle, ndiqinisekile ukuba undwendwe luyakonwabela ukusonga kwiveranda egqunyiweyo. Indawo yokuhlala kwaye uphumle kwaye wonwabe ebumelwaneni.
Ngaphakathi kweli gumbi lipholileyo linekhitshi elivulekileyo / lokutyela / igumbi lokuhlala elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, elinehombiso ekunika imvakalelo yasekhaya. Kwigumbi lokuhlambela uya kufumana iwasha kunye nesomisi. Igumbi lokulala linebhedi yokumkanikazi enekhabhathi kunye nesinxibo, indawo eninzi yokukhulula kunye nokwenza uzive usekhaya. Kukwakho nebhedi.
Le ndlu ineyadi entle engasemva enemithi evuthiweyo. Indawo yePatio ine-BBQ kunye nendawo yokuhlala. Ilungile kwezo ntsuku zishushu.
Eli khaya lisezantsi edolophini kwaye likumgama wokuhamba we-Exploits river, isibhedlele, ibala lemidlalo, icinema, ibala lokudlala, ipaki yamanzi, indawo yokulala yokutyibiliza kunye neendawo zokutyela.
I-Shampoo / i-ConditionerHeating
DryerFree yokupaka kwizakhiwo
Ikhebhula / iSkrini esiFlethi TVFamily / Umntwana onobubele
Iimbiza zentsimbi / iiPani
ILaptop indawo yokusebenza enobubele Umnyango wabucala
Akutshaywa ngaphakathi ekhaya. Ii-ashtray ziya kubonelelwa kwindawo yepatio.
Ixesha lokungena ngu-3:00 emva kwemini ukuya ku-11:00 ebusuku
Izitya kufuneka zihlanjwe
Qaphela abamelwane (inqanaba lengxolo) ngamaxesha onke, ngaphakathi nangaphandle kwendlu.
4.96 · Izimvo eziyi-170
Ubumelwane bulungile kwaye bumnandi ngabamelwane abanobuhlobo. Kukho indawo yokudlala ebumelwaneni kwaye isitrato sinezinga eliphantsi lokugcwala.
Umbuki zindwendwe ngu- Trudy
Ndiza kubulisa undwendwe xa sifika okanye kungekudala emva koko. Ngelo xesha undwendwe lunokuqhelana nendawo kwaye lubuze nawuphi na umbuzo olunokuba nawo.